SARS-CoV-2 Dhex-dhexaadinta Soo-saareyaasha Degdega ah ee Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiye | Immuno
Loo Adeegsaday SARS-CoV-2 Dhex-dhexaadinta antibody antibody Rapid
Muunad Serum, plasma, ama dhiig dhan
MOQ 10000 imtixaan
Xirxirida 20 xirmooyinka tijaabada / Sanduuqa wax lagu rido 50 sanduuq / Kartoonka Cabbirka Xajmiga: 64 * 44 * 39cm
Xogta Tijaabada Cutoff 50ng / mL
Lacag bixinta Wareejinta bangiga
Tijaabad dhakhso leh oo lagu ogaanayo tayada lagu ogaanayo unugyada difaaca jirka ee 'SARS-CoV-2' ama talaalkeeda oo dhan dhiig, serum, ama plasma.
1. CE Ansixiyay
2. Liiska cad ee Shiinaha ayaa ogolaaday soo saaraha xirmooyinka tijaabada COVID 19 iyo SARS-CoV-2 Dhex-dhexaadinta Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab)
A. Baaritaanka dhiigga, Dhiigga faraha oo dhan waa la shaqeyn karaa.
B. Cutoff waa 50ng / mL
C. Fududahay in la shaqeeyo, ma jiraan waxyaabo dheeri ah oo loo baahan yahay in lagu wado baaritaanka
D. Muunad Yar ayaa loo baahan yahay. 10ul oo serum ah, plasma ama 20ul oo dhiig dhan ah ayaa kufilan.
U oggolow aaladda baaritaanka, muunadda, keydka, iyo / ama kontaroolada inay u dhigmaan heer kulka qolka (15-30 ° C) baaritaanka ka hor.
1) Keen boorsada heerkulka qolka kahor intaadan furin. Ka saar qalabka baaritaanka kiishka xiran oo sida ugu dhaqsiyaha badan u isticmaal.
2) Dhig aaladda tijaabada meel nadiif ah oo jiif ah.
Qabo dhibcaha toosan, u muuji muunada ilaa Line-ka Buuxi (ugu badnaan 10 μL), kuna wareeji muunada tijaabada si fiican (S) aaladda tijaabada, ka dibna ku dar 3 dhibcood oo kayd ah (qiyaastii 120 mL) oo bilow saacadda . Fiiri sawirka hoose. Iska ilaali inaad si xun u tijaabiso goobooyin hawo ah (S).
Si aad u isticmaasho dhibciye: Ku hayso dhibcaha toosan, u soo qaad shaybaarka 0.5-1 cm oo ka sarreeya Khadka Buuxi, kuna wareeji 2 dhibic oo dhiig oo dhan ah (qiyaastii 20 µL) si fiican (S) qalabka baaritaanka, ka dibna ku dar 2 kaydinta (qiyaastii 90 uL) oo bilow saacadda. Fiiri sawirka hoose.
Si loo isticmaalo mikropipette: Pipet-ka iyo ku shub 20 µL oo dhiig ah dhammaan tijaabada (S) ee qalabka baaritaanka, ka dibna ku dar 3 dhibcood oo kayd ah (qiyaastii 120 µL) oo bilow saacadda. Fiiri sawirka hoose.
3) Sug ilaa xarriiqda midabku muuqdaan. Ku aqri natiijooyinka 10 daqiiqo. Ha turjunin natiijada 15 daqiiqo kadib.
- Wanaagsan (+): Kaliya C line ayaa muuqda, ama T line wuxuu u dhigmaa xariiqda C ama wuu ka tabaryaryahay khadka C Waxay muujineysaa inay jiraan unugyada difaaca jirka ee SARS-CoV-2 ee tijaabada ah.
- Taban (-): Sadarka T iyo sadarka C labaduba way muuqdaan, marka xoojinta xariiqda T ay ka xoog badan tahay xariiqda C. Waxay muujineysaa inaysan jirin SARS-CoV-2 oo ka hortageysa unugyada jirka ku jira tijaabada, ama haddii kale qeybta SARS-CoV-2 ee ka hortaga unugyada jirka waa heer aad u hooseeya.
- Aan ansax ahayn: Khadka xakamaynta ayaa ku guuldareystay inuu soo muuqdo. Muga muunad aan ku filnayn ama farsamooyinka hab-raaca qaldan ayaa ugu badan
Hore: COVID-19 Dhex-dhexaadinta Antibody Imtixaanka Degdega ah
Xiga: COVID-19 Qalabka baaritaanka Antigen Xaashida Goynta
baaritaanka antigen iyo antibody
COVID-19 dhexdhexaadinta baaritaanka jirka
baaritaanka igm antibody
antibody xirmada tijaabada
COVID-19 Igg Igm xaashida Goynta
COVID-19 Qalabka baaritaanka Antigen Xaashida Goynta